Jan Oblak oo iska diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Atletico Madrid – Gool FM
Jan Oblak oo iska diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Atletico Madrid
(Atletico) 29 Agoosto 2018. Warbaahinta Spain ayaa werisay in goolhaayaha Atletico Madrid Jan Oblak uu iska diiday in heshiiska uu u kordhiyo xiligan kooxdiisa reer Spain.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa dabacay isniintii lasoo dhaafay in Atletico Madrid ay kusii dhawaaneyso in ay qandaraaska u kordhiso Jan Oblak, kahor inta aan la gaarin ciida gaaleed ee Christmas-ka.
Laakiin wargeyska ayaa markale sheegay subaxnimadan in Jan Oblak uu iska diiday in heshiis kordhin uu u sameeyo kooxdiisa Atletico Madrid, xili heshiiskiisa haatan uu dhacayo sanada 2021.
Waararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Oblak uusan xiiseyneynin inuu cusbooneysiiyo qandaraaskiisa Atletico Madrid sababtoo ah ma uusan ku farxin qaabka ay maamulka kooxda Atletico ku doonayaan inay kaga saxiixdaan heshiiskan cusub.
Jan Oblak ayaa la fahansan yahay in suuqan xagaaga uu iska diiday dalab xoogan ee kaga yimid kooxda Chelsea, balse wuxuu go’aansaday inuu iska sii joogo Atletico Madrid.
Henry oo sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii uu ka bartay Guardiola inta ay ku wada sugnaayeen Barcelona
Jose Mourinho oo saaka laga waayay gabi ahaanba xarunta tababarka ee Manchester United!!